Windows Noticias waa degel ka kooban AB Internet. Boggan internetka waxaan ka taxaddarnaa inaan la wadaagno dhammaan wararka ku saabsan Windows, casharrada ugu dhammaystiran iyo falanqaynta alaabooyinka ugu muhiimsan ee qaybtan suuqa.
Tan iyo markii la bilaabay 2008, Windows News wuxuu noqday mid ka mid ah bogagga tixraaca ee qaybta nidaamka hawlgalka Microsoft.
Kooxda tifaftirka Windows News waxay ka kooban yihiin koox ka mid ah Khubarada teknolojiyadda Microsoft. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda, waad awoodaa noo soo dir foomkan si aad u noqoto tafatire.
Waxaan isticmaali jiray Windows illaa 90-maadkii, markii PC-kii iigu horreeyay uu soo galay gacmahayga. Tan iyo markaas waxaan had iyo jeer ahaa adeege daacad u ah dhammaan noocyada ay Microsoft ku sii deysay suuqa Windows.
Tan iyo markii aan aad u yaraa waxaan had iyo jeer isticmaali jiray Windows, labadaba shakhsi ahaan iyo xirfad ahaanba. Noloshayda gaarka ah aad baan ugu jeclaa kombayutarada ilaa iyo markii aan yaraa waxaan qaatay koorsooyin online ah waxaanan noqday iibsade joogta ah majaladda rasmiga ah ee Windows. Hadda waxaan naftayda la socodsiiyaa xaaladihii ugu dambeeyay ee nidaamkan qalliinka ee sida daacadda ah noo ahaa sannadihii la soo dhaafay.
Windows-gu wuxuu qabsaday dunida Informatica in kastoo ay rabaan inay xukunka ka tuuraan, haddana wali waa jaan-goyn. Waxaan isticmaalayay Windows ilaa 1995 waana jeclahay. Dheeraad ah: ku celcelinta ayaa kaamil ah.
Jacaylka wax kasta oo la xidhiidha tignoolajiyada ilaa kombuyuutarkeygii ugu horreeyay. Hadda, aniga ayaa mas'uul ka ah maamulka adeegyada IT-ga, shabakadaha iyo nidaamyada, haddii ay jiraan wax aan isbeddelin tan iyo bilawgii, waa Windows. Halkan waxaad ku arki kartaa wax kasta oo aan baranayay sannadihii la soo dhaafay ee la xiriira nidaamka hawlgalka Microsoft.
Windows xiise, baare astaamaha cusub ee nooc kasta oo cusub soo bandhigo. Maalintayda maalinba maalinta ka dambaysa waa aalad muhiim ah, oo aad ku shaqeyn karto ama ku raaxaysan karto.
Noloshayda oo dhan waxay kudhowdahay Windows ilaa 95, 98, XP iyo 7, hadana waxaan ku raaxeysanayaa Windows 10 kaas oo inbadan balanqaaday bilowgeeda mana niyad jabin U heellan farshaxanka, kaas oo Windows ka dhigaya hawl maalmeedkeyga mid aad u fudud. Wax ka qorida waxqabadkeeda waa wax aan sidoo kale ku raaxeysto.
Jacaylka softiweerka iyo gaar ahaan Windows, waxaan u maleynayaa in wadaagida waxyaabaha iyo aqoonta ay ahaato mid xaq ah, oo aan ikhtiyaar aheyn. Sababtaas awgeed, waxaan jeclahay inaan la wadaago wax kasta oo aan ka barto nidaamkan qalliinka.